China eriri ebu ebu factory na emepụta | Yuantuo
Onye na-ebugharị njem nwere ike izute ihe achọrọ maka njem otu ahịhịa nke ịdepụta ihe ọverageụverageụ, njuputa, nhicha na akụrụngwa ndị ọzọ, yana nwekwara ike ịme otu ahịrị n'ime ahịrị dị iche iche ma jiri nwayọ na-aga ije, iji mepụta ikike nchekwa ma zute ihe achọrọ maka nri nri nke sterilizer, ikpo okwu nchekwa karama na igwe karama igwe. Anyị nwere ike ime ka isi na ọdụ nke onye na-ebu sistem abụọ na-agwakọta agwakọta agwakọta, nke mere na karama ahụ (nwere ike) ahụ nọ n'ọnọdụ siri ike Ọ nwere ike igboju nrụgide na enweghị njem njem nke karama efu na karama siri ike.
Ngwa akporo nke gbagọrọ agbagọ ebu: ọ na ọtụtụ-eji akpaka erute na nkesa nke nri, nri mkpọ, na nkà mmụta ọgwụ, onunu, ntecha na ịsa ngwaahịa, akwụkwọ ngwaahịa, esi, mmiri ara ehi na ụtaba, wdg, nakwa dị ka na-akara erute nke azu nkwakọ ngwaahịa.
Okwesiri maka ibughari igbe di iche iche, akpa, pallets, wdg. Ihe ndi ozo, obere ihe ma obu ihe ndi ozo kwesiri ka ebughari na pallets ma obu igbe ntụgharị. Ọ nwere ike ibufe otu mpempe ihe dị arọ ma ọ bụ buru nnukwu ibu mmetụta. Ọ dị mfe ijikọ na iyo ahịrị ahịrị. Ọ nwere ike na-etolite a mgbagwoju lọjistik njem usoro na otutu drum ahịrị na ndị ọzọ na conveyors ma ọ bụ pụrụ iche igwe izute dị iche iche usoro chọrọ. Enwere ike iji nchịkọta a mara maka ịchekwa na ịbugharị ihe. Thegbọ ala ahụ nwere uru nke usoro dị mfe, ịdabere na nkwado dị mfe.
Mbugharị na-adịgide adịgide, ihe ahụ na eriri na-ebugharị enweghị usoro mmegharị, nke nwere ike izere mmebi nke ihe na-ebugharị. Obere mkpọtụ, nke kwesịrị ekwesị maka ebe ọrụ na-adịghị jụụ. Ọdịdị ahụ dị mfe ma dịkwa mfe ilekọta. Ike oriri dị ala na ọnụ ala. Okwesiri maka nhazi nri na ulo oru mmeputa, dika onwa achicha achicha, uzo mmeputa ngwugwu, ngwa nri nri oyi juru oyi, uzo nri nri, nchekwa nri na ngwa ahia, wdg.
Nke gara aga: Chain ebu
Osote: Curve eriri ebu